Sidee in ay tirtirto Apps rabin ka iCloud?
Muran aan iCloud waxaa loo arkaa mid ka mid ah muujinta ugu weyn ee Apple maalmahan, iyo dadka isticmaala ee macruufka doonaya inuu iibsado ay ku dukaanka Lugood u music, xogta, barnaamijyadooda iyo wax ka badan yihiin. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira muddo marka aad kala soo bixi wax oo waxaad ogaatay in app yahay ee aan waxba idiin anfacayn ama aad rabto in aad lacag la'aan ah qaar ka mid ah barnaamijyadooda ka iCloud si fiican markaas waxaa fud. Inta aynaan fiirin ijaara ee iCloud iibsadaan. Mar kasta oo app la iibsaday iCloud ma kaydiso gadashada in. Halkii kaliya hayaa taariikh Chine oo lagu iibsaday ama lagala soo bixi ee la soo dhaafay si aad awoodo inaad mar kale ku rakibi in si Lugood ama qalab kale oo wax. Taas aawadeed iCloud bandhigayaa oo Chine ayaa lagu iibsaday oo ka dhigaysa link la mid kasta oo iyaga ka mid ah inay App Store ah. Taas macnaheedu waa in aad ka iibsan kartaa ama kala soo bixi tirada xad lahayn ee Chine laakiinse iyagu ma ay isticmaali doonto wax kasta oo bannaan ee xisaabtaada iCloud, iyo Apple aad siin doonaa fasax ah si ay u tirtirto ka liiskan oo ay ku kaydsan iCloud.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in laga takhaluso barnaamijyadooda kaas oo ay ku kaydsan yihiin iCloud, waxaad iyaga "Qarinaysaan" dhigi kara. Si aad dadow barnaamijyadooda la rabin, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Qariyey Apps rabin on iCloud
1. aad iPhone, iPad ama iPod Touch, gudubnee App Store> Updates> iibsaday. Waxaad awoodi doontaa in aad aragto liiska Chine oo lagu iibsaday. Tusaale ahaan tan, app intii square la qariyey sida hoos ku qoran
2. aad PC ama Mac Windows double click on Lugood iyo madaxda dukaanka. Riix iibsaday kaas oo midigta ee suuqa. Hadda waxaad la qaadi doonaa si taariikhda la iibsaday
3. Apps Hadda furan oo ku yaalla qaybta sare ee shaashadda. Liiska dhan barnaamijyadooda bixi oo iibsaday tusi doonaa. Hadda kaxee mouse ka badan app aad rabto inaad qariso oo ah "X" ka muuqan doona
4. gujinaya "X" ka qarin doonaa barnaamijyadooda ka. Markaas liiska Chine in la cusboonaysiiyaa lahaa, oo ma noqon doonto in aad awood u arkaan barnaamijyadooda aad qariyey
5. Isla noqon lahaa kiiska ku saabsan App Store in aad iPhone.
> Resource > iCloud > Sida loo Delete Apps rabin ka iCloud?